Ururka Al-shabaab Oo muujiyey in ay weli awood buuxda ku leeyihiin gobollada kala gedisan ee dalka – Radio Daljir
Luulyo 25, 2013 3:46 b 0
Baraawe, July 25, 2013 – Kooxda Al-shabaab ayaa war-bixin dheer ka soo saaray weeraradii ugu dambeeyey ee ay ka fuliyeen gudaha dalka Soomaaliya, xili bartamaha looga jiro haatan bisha barakaysan ee Rammadaan.
Afhayeen u hadlay kooxda Al-shabaab oo la yiraahdo sheikh Cabdicasiis Abu Muscab ayaa ka hadlay arimo badan oo la xiriira dhaq dhaqaaqa kooxda, wuxuu sheegay in qorshaha dagaalka ee kooxda uu yahay mid dar dar leh.
Abu Muscab wuxuu daaha ka qaaday in ay gudaha dalka ka fuliyeen 108 weerar oo waa weyn intii lagu jiray bisha Rammadaan, isagoo weeraradaasi ku sheegay in ay yihiin kuwa muujinaya in ay awooda kooxda al-shabaab ay sii xoogsatay.
Afheyeenka u hadlay Al-shabaab oo sharaxaad ka bixiyey nooca weerarada ay qaadeen wuxuu sheegay, 41 weerar in ay ahaayeen kuwa fool ka fool ah oo ay la galeen ciidamada dowladda, halka 51 weerar oo kale ay ahaayeen kuwa Dahsoon oo ay ka fuliyeen gudaha dalka.
Kooxda Al-shabaab waxay sheegeen in weerarada ugu badan ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho, basle waxaa warkooda lagu sheegay in weerarada inta kale laga fuliyey, magaalada Baydhabo iyo deeganada Jubbada Hoose oo ay joogaan AMISOM.
Baahin: Arbaca, 24 July 2013, Caawa Iyo Daljir Axmed Sh Maxamed Tallman ~ Daljir ~ Boosaaso